Maxaad ka taqaan dadka dunida loogu raadinta badan tahay (Top Wanted list) – SBC
Maxaad ka taqaan dadka dunida loogu raadinta badan tahay (Top Wanted list)
Warbaahinta reer Galbeedka tan iyo makrii ay soo shaacdey geerida hogaamiyihii Al-Qaacida Osama Bin Ladin wararka Telefishinada & Wargeysyada waxaa ugu horeeyey war ku saabsan weerarka iyo dhimashada Bin Ladin, iyagoo muujinayey in uu yahay ninka koowaad ee dunida loogu raadiska badnaa “World’s most wanted Man”, laakiin ma jirin cadeyn sharci ah oo muujinaysa in uu ahaa Wanted no1.
Hadaba geeridiisa ka dib waxaan eegaynaa dadka sharciyan ku jira liiska ugu sareeye ee dadka loogu doon doonsita badan yahay, wargeyska Forbes ee Mareykanka laga leeyahay sanad kasta wuxuu daabacaa dadka aduunka loogu raadinta badan yahay.
Lambarka koowad ee dadka la doon doonayo waxaa galey Joaquin Guzman Loera
Joaquin Guzman Loera wuxuu u dhaashay wadanka Mexico waa caaqil daraag waxaa lagu naaneysaa El Chapo’ oo la macno ah Gaabow (short) taasi wuuxuu ku qaatey magacaasi dhirirkiisa oo ah 5ft 6 inches.
Guzman wuxuu madax u yahay koox lagu magacaabo Sinaloa Cartel,oo ku talax tagtey u safrinta ama galinta wadanka Mareykanka daroogada nooca qatar ah ee loo yaqaan Cocaine.
Wuxuu noqdey caaqilka daraago ganacsiga markii la qabtey ninkii ay isaga isaga soo horjeedeen ee caanka ku ahaa ganacsiga daroogada ninkaasi oo ahaa ninkii ugu awooda weynkaa kooxaha ganacsiga daroogada ee lagu magacaabi jirey Osiel Cárdenas.
Guzman Ururkiisa Sinaloa Cartel, wuxuu ku jiraa dagaal ganacsiga daroogada ku saleysan oo kumanaan kun oo qof ay naftooda ku waayeen, dagaalkaasi oo ku saleysan daroogada la galiyo dalka Mareykanka.
Sanadkii 1993-kii El Chapo’ ama gaabow dawlada Mexico ayaa gacanta ku dhigtey isagoo xiligaasi daroogo safrinayey, dawlada Mareykanka ayaa ka dalbatey Mexico in ninkaasi loo soo gacan galiyo, sanadkii 2001-dii iyadoo loo gacan galin rabo Mareykanka ayuu laaluush siiyey ilaaladii xabsiga Puente Grande isagoo laga bixiyey baabuur dhaqitaan 70 sarkaal ayaa dhacdadaasi loo xiray.
Mareykanka & Interpool ayaa ninkan baadigoobaya waxaana la dul dhigay madaxiisa 5 milyan oo doolar, jariidada Forbes waxay ku qiimeysay in uu yahay ninka 60-aad ee aduunka ugu awooda badan iyadoo hantidiisa lagu qadarey 1 bilyan oo doolar.
Kaskar wuxuu madax u yahay shirkad lagu magacaabo D-Company oo ah shirkad dambiyada qorsheysan oo ka dhisan Mumbai Hindiya taasi oo ku lug leh daroogo safrinta, iibka hubka sharci darada ah iyo dilalka.
Kasar waxaa lagu eedeyaa in uu xiriir la leeyahay Al-Qaacida iyo in uu ka dambeeyey weeraradii bambaano ee ka dhacay magaalada Bombay sanadkii 1993-kii kuwaasi oo ay ku dhinteen 273 qof.
Waxaa jira warar aan la hubin oo sheegaya in uu ku nool yahay Pakistaan oo waji artificial ama been abuur ah uu xiran yahay si aan loo garan shakhsiyadiisa.|
Semion wuxuu u dhashay Ukraine balse asalkiisu wuuxu ka soo jeedaa Yuhuuda wuxuu ugu jiraa FBI-da Mareykanka liista 10-aad ee dadka aad loo doon doonayo, ninkan wuxuu ka qayb qaatey wax dabamarin lacageed oo sharci daro ah oo ka dhacdey Mareykanka taasi oo lagu lunsadey aduun lacageed oo gaaraya 150 milyan oo doolar.
Denaro waa madaxa maafiyada jasiirada Sicilia ee wadanka Talyaaniga wuxuuna xilkaasi qabtey ka dib markii madixii kooxdaasi maafiyada ee lagu magacaabo Cosa Nostra Bernardo Provenzano la xiray sanadkii 2006-dii.
?Denaro waxaa la sheegayaa in uu xiriir adag la leeyahay ganacsato waa weyn kuwaasi oo leh Bangiyo & xarumo ganacsi, sanadkii 2010-kii ciidamada Booliiska Talyaaniga waxay la wareegeen baabuur, xarumo ganacsi & hanti kale oo lagu qiimeeyey 700 milyan oo Euro, iyadoo la helay bangiyo si weyn xiriir ula lahaa oo lacag gudbin kala shaqeyn jirey ninkan.
Ragga la qabtey waxaa ka mid ahaa ???Vito Nicastri oo ahaa ganacsade weyn oo u dhashay Jasiirada Sicilia iyadoo ninkaasi lagu eedeeyey in uu ahaa ragga lacagaha u maamuli jirey
Alimzhan Tokhtakhounov oo horey u ahaa ciyaartoy kubada cagta ah wuxuu u dhashay wadanka Uzbekistan waxaa la sheegay in uu madax u yahay boqortooyo dambiyo caan ku ah, waxaa lagu helay in uu laaluush siiyey kooxdii xaakimiinta ciyaarihii 2002 Winter Olympics ee dalka Canada u diiday inay heleen biladaha dahabka.
Alimzhan Tokhtakhounov wadamo ka tirsan Yurub & Mareykanka ayaa si weyn u doodoonaya iyadoo Booliiska caalamiga ah ee Interpool ay sidoo kale u jareen ogeysiis soo qabasho ah.
Dawlada Ruushka waxay sheegtey inay ka fiirsanayso jinsiyadeeda wadankaasi ee uu haysto taasi oo ku aadan falalka dambiyada ee uu ku lugta leeyahay .